ဖောင်ကြီး Covid စင်တာကစောင့်နေမယ် ဆိုပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ မဲစွယ် တဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ ပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင် – SanThitLa
ဖောင်ကြီး Covid စင်တာကစောင့်နေမယ် ဆိုပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ မဲစွယ် တဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ ပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင် ကတော့ Hotel Quarantine ဝင်ရင်Covid 19 positive ဖြစ်ကြောင်း ဆေးစစ်ချက်အဖြေကြောင့် ဧရာဝတီ Quarantineစင်တာကို ပြောင်းရွေ့ကာ နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုဆိုရင်ရောဂါအရှင်းပျောက်ကင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ ပေမယ့် ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာမှာ ဆရာဝန်အဖြစ် Volunteer လုပ်ကိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် လည်း အများအကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မောင်ကတော့ ဒီကနေ့မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ် တဲ့ သူတွေ ကို အခု လိုပဲဒဲ့ ပြောလာပါတယ်။“မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတို့ရေ! အစ်ကို ဖောင်ကြီးကစောင့်နေပါတယ်နော်.”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ စည်းစနစ်တကျ မပြုမူတဲ့သူတွေကို ဒဲ့သတိပေးစကားလေးပြောခဲ့တာပါ။
အခုလိုချိန်မှာ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အထောက်အကူပြုနည်းတစ်မျိုးပါပဲနော်။လူစုလူဝေးလုပ်တဲ့ ဘယ်ပါတီမဆို မလုပ်သင့် တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်နေတာပါနော်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ။ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း လူစုလူဝေးနဲ့ ပါတီတွေအင်အားပြတဲ့ အပေါ်အမြင်လေးတွေကို မန့်ခဲ့ ကြပါဦးနော်။
အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ ေမာင္ျဖစ္သူ စိန္ၿဖိဳးလႈိင္ ကေတာ့ Hotel Quarantine ဝင္ရင္Covid 19 positive ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖေၾကာင့္ ဧရာဝတီ Quarantineစင္တာကို ေျပာင္းေ႐ြ႕ကာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္အခုဆိုရင္ေရာဂါအရွင္းေပ်ာက္ကင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခဲ့ ေပမယ့္ ေဖာင္ႀကီးကုသေရးစင္တာမွာ ဆရာဝန္အျဖစ္ Volunteer လုပ္ကိုင္ေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ လည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေမာင္ကေတာ့ ဒီကေန႔မွာ လူစုလူေဝးနဲ႔ မဲဆြယ္ တဲ့ သူေတြ ကို အခု လိုပဲဒဲ့ ေျပာလာပါတယ္။“မဲဆြယ္ထြက္ၾကတဲ့ ညီေလး ညီမေလးတို႔ေရ! အစ္ကို ေဖာင္ႀကီးကေစာင့္ေနပါတယ္ေနာ္.”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ စည္းစနစ္တက် မျပဳမူတဲ့သူေတြကို ဒဲ့သတိေပးစကားေလးေျပာခဲ့တာပါ။
အခုလိုခ်ိန္မွာ လူစုလူေဝးေရွာင္ရွားျခင္းဟာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို အေထာက္အကူျပဳနည္းတစ္မ်ိဳးပါပဲေနာ္။လူစုလူေဝးလုပ္တဲ့ ဘယ္ပါတီမဆို မလုပ္သင့္ တဲ့ လုပ္ရပ္ကို လုပ္ေနတာပါေနာ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ။ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း လူစုလူေဝးနဲ႔ ပါတီေတြအင္အားျပတဲ့ အေပၚအျမင္ေလးေတြကို မန႔္ခဲ့ ၾကပါဦးေနာ္။
အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ြင္ေသာ ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ပရိသတ်တွေကို “COVID ကာလ မှာ အားရှိတာတွေ စားပါ” ဆိုပြီး ဆက်ဆီ ကျကျ ပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း
သက်ကြီးရွယ်အို ဟာသလူရွှင်တော်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန် ထောက်ပံ့ငွေများ မဲနှိုက်ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
လူမှုကျင့်ဝတ်မဖောက်ပြားခဲ့ပါဘူးလို့ ဖွင့်ဟလိုက်ပြီး သူမနဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ ယခင်က ဆက်ဆံရေးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ